Ogaden News Agency (ONA) – Taliyaha Ciidanka Itoobiya oo Howlgab Kadhigay Generallo Badan.
Taliyaha Ciidanka Itoobiya oo Howlgab Kadhigay Generallo Badan.
War qoraal ah oo kasoo baxay hogaanka guud ee Ciidamada Itoobiya ayaa lagu sheegay in shaqadii laga fadhiisiyay 13 Janaraal oo howl gab ah, kuwaas oo kamid ahaa ragii ugu cadcadaa Janaraalada Itoobiya.
Sida kucad qoraalka kasoo baxay Taliyaha ciidamada Itoobiya Janaral Sara Mokonen waxaa howl gab laga dhigay 13 Janaraal oo kamid ahaa hogaankii Ciidamada Itoobiya, waxaana qoraalka lagu sheegay in mar horaba ay ragan noqdeen howl gab marka la eego nidaamka udagsan wadanka.
Janaraalada howlgabka laga dhigay waxaa kamid ah General Gebre Dila, oo ahaa shakhsigii kala gaabiyay shacabka Soomaalida Ogadenia iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee kudhaqan geeska Africa.
General Gebre Dila ayaa lagu xasuustaa isku dirkii iyo bahdilkii uu kusamayn jiray maamulada Soomaalida isagoo ahaa ninka taliskii hore ee Wayaanaha wakiilka uga ahaa dadka Afsoomaaliga kuhadla.
Arintan ayaa umuuqata in ay qayb katahay isbadalka guud ee laga filayo wadanka Itoobiya, kaas oo saamayn doona ciidan iyo shacab ba, waxaana hada kahor labadalay qaybo kamid ah maamuladii lashaqayn jiray taliskii hore.
General Sara Mokonen ayaa horaan shaqada uga fadhiisiyay labo General oo kala ahaa General Abraham Wold oo ahaa ninkii cuni jiray hantida shacabka Soomaalida Ogadenia iyo General Mahari Ma’sho. Kuwaas oo ahaa labo shakhsi oo aad uga dhex muuqday ciidamada Itoobiya.